Ifama ye-E Berry - indawo ephithizelayo yobomi - I-Airbnb
Ifama ye-E Berry - indawo ephithizelayo yobomi
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguE Berry
UE Berry ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uE Berry iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Siyakwamkela kwiindawo zethu eziphakamileyo! Sifuna ukukumema kwindawo yethu encinci yokuphila esembindini weIzery Mountains. Sihlala kwindledlana kunye neJamani kunye neRiphabliki yaseCzech eyenza ibe yindawo ekhethekileyo yokuchitha iholide yakho okanye ikhefu elifutshane. Enoba uthanda ukuhlala kwisitulo esineveranda okanye ukhetha ukunyuka intaba, ukuqhuba ibhayisekile, ukuchitha ixesha lakho ngasemanzini sikunika indawo efanelekileyo! ngexesha lonyaka - khetha ibhasikithi yakho yeziqhamo ngokwakho! sikhulisa ii- raspberries, ii-blueberries kunye nee-serviceberries.
I-E Berry Farm yifama encinci ekhusela indalo eyakhiwe ngabantu abatyibilika esixekweni abaye bagqiba kwelokuba bahlale phantsi baze bashiye isiphithiphithi sekomkhulu lasePoland. Ukutshintsha bekunesibindi kodwa asizisoli! Siyakuvuyela ukwenza indawo efanelekileyo yentsapho kunye neendwendwe zethu kwaye sitshintshe indlela yethu yokuphila.
Igumbi lethu leendwendwe kumgangatho wokuqala liza kukwenza uzive usekhaya. Uza kukwazi ukufikelela kwigumbi lokuhlambela leendwendwe elineshawa nebhedi yokumasaja (imali encinci yokusebenzisa ibhedi).
Iinduli, iindledlana zeentaba nezebhayisekile, imifula, ichibi, amahlathi. Ngechibi ekuthiwa yiJezioro Złotnickie unokuqesha isikhephe, i-kayak, izikhephe ezihamba ngesithuthi. Iinqaba eziliqela ezivulekele iivesti zikwindawo ekufutshane, uhambo losuku oluya ePrague okanye eDresden lukwiiyure eziyi-2 ngemoto. Ii-resort zamanzi afudumeleyo Уwieradów Zdrój kunye neCieplice zikumgama wemizuzu eyi-25. I-Ski resort Ski and Sun 25 imiz. kude. Imibhiyozo emininzi yokuqala ivuleleke ebantwini unyaka wonke.
Umbuki zindwendwe ngu- E Berry
Sihlala endlwini ixesha elizeleyo, kodwa sihlala sinengqiqo kwaye silahlekelwe ziindwendwe zethu ezithandayo nanini na kufuneka. Sithetha isiNgesi, isiFrentshi, iSpanish.